April 28, Photograph.
Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay. Hormariyaan sidii ay dumarka uga qeybgali lahaayeen siyaasadda, ayagoo dhisaya awoodda musharraxiinta haweenka ah, adeegsanayana qaabab ay ka mid yihiin datsuurka ololaha ama tababarka hogaaminta; Taageeraan barnaamijta wacyi-gelinta codbixiyayaasha, gaar ahaa kuwa lagu beegsanayo baahidda macluumaad ee codbixiyayaasha dumarka ah; iyo, Taageeraan waxbaridda gabdhaha, ayagoo wax ka qabanaya dhaqanka fuquuqa ah ee ku aaddan tacliinta hablaha, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya ololaha waxbarashada dadweynaha.
Kuwa loo hayso dembiyada waxa ay xaq u leeyihiin in laga sooco dadka waaweyn ee la xiran, laga difaaco tacaddiyada galmada, waxbarasho la siiyo, iyo waxyaabo kale.
Carruurta uu saameeyay dagaalka waxa ay xaq u leeyihiin ixtiraam iyo ilaalin gaar ah. Joojinta Askaraynta Carruurta, Ula Dhaqanka Carruurta Lala Xiriirio Ururada Hubaysan Si Waafaqsan Heerarka Caalamiga ah Soomaaliya waa in ay qaadaa dhammaan tallaabooyinka daruuriga ah si ay carruurta uga saarto ciidamadeeda, ayna si wanaagsan ula dhaqanto oo ay u difaacdo carruurta ay adeegsadaan ururka Al-Shabab iyo ururada haybaysan ee dowliga ah ama aan dawliga ahayn.
Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka dastuurja madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Ayadoo qeyb ka ah dadaalka lagu difaacayo shacabka nugul, ayaa Human Rights Watch waxa ay ugu baaqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradaha arimaha gudaha ee federaalka iyo maamul goboleedyadaba iyo weliba maamulka gobolka Benaadir in ay:.
Ajnabi dalka waa ka noqon karaa madaxweyne Qorshe Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo taageerayaashooda waa in ay ballanqaadaan dib u eegid degdeg ah oo lagu sameeyo dhinacyada hoos ku xusan: Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Xukuumadda oo kaashanaysa howlwadaageeda caalamiga ah, wadatashina la yeelanaysa dadka soo barakacay, waa in mudada dhexe ay: Xeerka dembiyadda ee dalka oo hadda dib u eegis lagu samayanyo, ayaa waxaa ku jira qodobo aan caddeyn, kuwaasoo xorriyada hadalka ka dhigaya dembi, oo ay ka mid tahay sumcad dhaawacidda.
Si degdeg ah u joojiyaan xoog ku raridda dadka soo barakacy ee ku nool Muqdisho iyo deegaannada kale ee ay dowladda ka taliso; Golaha wasiiradda marsiiyan ayna dhaqan geliyaan siyaasadda barakaca ee ; Caddeeyaan dowrka kaga aaddan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo maamullada maxalliga ah arinta dadka kusoo barakacay magaalooyinka; iyo, Si degdeg ah u geeyaan boolis tayaysan deegaannada ay ku yaallaan xeryaha aan rasmiga ahayn ee magaalooyinka waaweyn, si loo suggo ammaanka asaasiga ah, loogana hortago tacaddiyada ka dhanka ah dadka soo barakacay.
Dasturka kun oo qof oo kasoo hayaamay macluushii iyo dagaalladii xigay, iyo weliba tobanaan kun oo kale oo dhawaan kasoo cararay dagaallo, ammaan daro iyo abaar, ayaa waxa ay noolal xumo ku haysataa caasimadda iyo magaalooyin kale oo dhalka ah.
Waa in gun-dhig looga dhigaa dib u habaynta ammaanka Soomaaliya ee re laga doodayo helitaanka isla xisaabtan, gaar ahaan samaynta hannaan xaqiijin iyo dusha kala socosho ah si meesha looga saaro taliyayaasha iyo askarta tacaddiyada geysta, kuwa cusub iyo kuwa hadda joogaba, iyo weliba in la xoojiyaa goobaha soomaaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee ay dhibbanayaasha xaqooda ka heli karaan. Ka caawisaa dadka aan awoodin ama aan rabin in ay ku laabtaan deegaannadooda, sidii ay u degi lahaayeen magaalooyinka waayen oo ay dadka u dhexgeli lahaayeen, ayadoo siinaysa hooy asaasi ah.
Ayadoo qeyb ka ah dib u habaynta lagu samaynayo laamaha sirdoonka iyo booliska, waa in dowladda, si gaar ahna wasaaradda amniga gudaha ay mudada dhexe u:.
Maamulkii hore waxa uu ku guuldaraystay in uu hogaan u yeelo arinta dadka soo barakacay, taasoo dhalisay in la qeexi waayo cidda ay tahay in ay dusha kala socoto, federaalka ama dowladda hoose.
Inkastoo Sharciga Federaalka ee Warbaahinta ay ku jiraan qodobo wanaagsan, ayaa haddana xannibaadaha saxaafadda ee sharcigaasi ay yihiin kuwa aan si wanaagsan loo qeexin.
Dacwad oogayaasha rayidka ah ayaa mararka qaar ku guuldaraystay in ay difaacaan xuquuqda dastyurka ay NISA kusoo qabato howlgalladeeda ka dhanka ah wararka xasaasiga ah iyo xorriyada hadalka.
Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, Xaqiijiyaan in dib u dastkurka ay hubiso in dhammaan noocyada xadgudubyada galmada si ku haboon loo maxkamadeeyo, ciqaabtuna ay ka turjumayso xaddiga uu gaarsiisan yahay dembiga; Ansixiyaan xeerka qabyada ah ee dembiyada galmada, ayagoo xaqiijinaya in nuqulka la ansixiyay uu waafaqsan yahay heerarka caalamiga ah; iyo, Wanaajiyaan qaabka si waafi ah wax loogu qaban karo dadka ka badbaaday xadgudubyada galmada, gaar ahaan in tababar gaar ah la siiyo howlwadeennada caafimaadka si ay u daryeelaan ayna si wanaagsan u daweeyaan dadkaasi, gaar ahaan dabiibidda, cafimaadka maskaxda, xanaaneynta iyo kaalmada dhanka sharciga ah.
Dhagaysiga dacwadaha ee maxkamadaasi ayaan gaarsiisneyn cusun caalamiga ah ee maxkamadeynta cksub ah, gaar ahaan in si buuxda loo helo qareen difaac iyo maxkamadeyn degdeg ah. Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in court December 28, Hormarinta Sinnaanta Dumarka iyo Ka Qeybgalkooda Siyaasadda Dowladdu waa in ay si degdeg ah u qaaddaa tallaabooyin lagu soo afjarayo fuquuqa ka dhanka ah dumarka.
Mudada kooban, dowladda Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka, iyo wasaaradaha caddaalada iyo amniga gudaha waa in ay: Shirka London ee dhacaya ka Mey ee diiradda lagu saari doono dib u habaynta ammaanka Soomaaliya, ayaa fursad muhiim u ah maamulka cusub iyo howlwadaagiisa caalamiga ah in ay ballanqaadaan oo ay si degdeg ah u ansixiyaan tallaabooyin wax ku ool ah oo gacan ka geysan kara ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka.
Dowladda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay bishii Maarsoayaa waxa ay fursad muhiim ah u tahay wax ka qabashada dhibaatooyin badan ee haysta xuquuqda aadanaha ee dalka, ayadoo kaashanaysa taageerada caalamiga ah. Maxkamadaha madaniga ah ayaa la sheegaa in ay hareeyeen siyaasado qabiil ku salaysan, musuqmaasuq, iyo in aanay dusha kala socon dacwad oogayaasha.
Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Maxkamadda milateriga ayaa weli qaada kiisas ka baxsan cueub sharci, oo ay ka mid yihiin dembiyada la xiriira argagixisada, iyo kiisas loo haysto dad rayid dastuurkq, taasoo khilaafsan sharciga caalamiga ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya.
Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo dashuurka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Haseyeeshee dalalkaasi ayaan u hurin waqti, dhaqaale iyo rabitaan siyaasadeed ee loo baahan yahay si loo sameeyo baaritaan lagu kalsoonaan karo.